Polisiin Ajaja Mana Murtii Diduun Ob. Lammii fi Dawit Abdataa Hidhaatti deebise. | OROMSIIS OROMO
1 Comment	/ March 29, 2021 June 16, 2021
Qondaalonni ABO Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa manni murtii waliigala Oromiyaa bilisaan gara mana isaanii akka deeman erga ajajeen booda poolisiin gara mana hidhaatti deebisuu abukaatoon himan.
Ajjeechaa wellisaa Haacaaluu Hundeessaa Hordofee kan too’ataman qondaalonni ABO Lammii beenyaa fi Daawit Abdataa dhadhacha gaafa 16/4/2013 ooleen yakka ittiin himataman irraa bilisa jechuun manni murtii ajajee ture.
Haata’uutii Poolisiin Oromiyaa himatamtoota kunneen osoo hin gadhiisin ji’oota sadiif manneen hidhaa Galaaniifi Mojoo tursiisee jira.
Manni murtii waliigala Oromiyaas poolisiin Oromiyaa namoota kunneen maaliif akka hin gadhiisne akka ibsuuf irra deddeebiin ajajaa turus poolisiin dhihaatee deebii gahaa osoo hin kennin tureera.
Manni murtichaa dhadhacha gaafa 07/07/2013 ooleen komishinarri komishinii poolisii Oromiy Araarsaa Mardaasaa qaaman dhihaatanii manni hojii isaan hogganan namoota kana maaliif akka gadi hin dhiisne dhihaatanii akka ibsaniif ajajee ture.
Abukaatoon Obbo Lammii Beenyaafaa obbo Guddannee Fiqaaduu BBCtti akka himanitti komishinarri koomishinii Pollisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa har’atti akka dhihaatan ajamee turus qaaman osoo hin dhihaatin hafaniiru.
Ergaa barreeffamaa mana murtichaatiif erganiinis sababa hojiitiin beellama kanarratti argamuu akka hin dandeenyeefi namoonni kunneen mana murtii federaalaatti dhadhacha waan qabaniif jecha osoo hin gadhiisin tursiisneerra yaada jedhu dhiheessuu isaaniis himan.
Haa ta’uutii manni murtii federaalaa namoonni kunneen akka hin gadhiifamneef dhorkaan kenneef yoo jiraate dhiheessanii akka hin jirres himan Obbo Guddanneen.
Manni murtii waliigala oromiyaas dhimmicha erga ilaaleen booda poolisiin himatamtoota kana asuma dhadhacharratti akka gadhiisu jechuun ajaje jedhan.
Poolisiinis namoota kunneen mana hidhaa Mojoo irraa mallatteesinee fidnee asitti akkamitti gadhiisna yaada jedhu dhiheessanis abbaan seeraa mana murtichaa kuni ajaja mana murtii waan ta’eef kabajamuu qaba jechuun ajajaniiru.
Obbo Lammii beenyaa fi Daawwita Abdataas murtii manni murtii ajaje Kanaan gara maatii isaaniitti galuuf erga taaksii waammataaniin booda karra irratti poolisoonni olirraa ajajamneerra jechuun ajaja mana murtii cabsuun gara mana hidhaa Mojootti deebisuu abukaatoon isaanii himaniiru.
‘Ajaja mana murtii kabajii dhabuun ol-aantummaa seeraa kabachiistuu danqeera’
Ajajni manneen murtii kabajamuu dhabuun gufuu ol-aantummaa seeraa mirkaneessuu ta’aa jiraachuu abokaatonni hidhamtootaa yeroo gara garaatti ibsaa turaniiru.
Ajjeechaa Artist Haacaaluu Hundeessaa hordofee Oromiyaa keessaa namoonni hedduun yakkoota garagaraan shakkamuun hidhamaniiru.
Namoonni dhimmi isaanii qulqullaa’ee murtii argatanii gadhiifaman jiraatanis, ergasii hanga ammaatti kanneen dhimmi isaanii murtii hin argannes jiru.
Ii’ootni saddet darban namoota sababoota adda addaatiin hidhamanii fi adeemsa olaantummaa seeraa kabachiisuu akkasumas raawwii ajajoota manneen murtii irratti rakkoolee hedduun kan itti mul’atedha jedhu abokaatoowwan BBCn yeroo gara garaa dubbise.
Dhimma kanarratti gama poolisii Oromiyaatti deebii argachuuf yeroo gara garaa yaalliin taasifne nu milkaa’uu dhabus, amma dura Ministirri Muummee Abiy Ahimad (PhD) qaamoleen raawwachiiftuu murteewwan manneen murtiitiin darban kamiyyuu kabajuu akka qaban akeekkachiisanii ture.
MM kana kan jedhan Onkololeessa bara dabre keessa walga’ii Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataa irrattidha.
Gaafas akkas jedhan: “Manni murtii nuti hin kabjneefi hin ajajamneef bilisaafi walaba ta’eera jechuun akkasumaan.”
Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaas gama isaatiin Guraandahala darbe dhimma kanarratti ibsa baaseen, ”Ajajni manneen murtii kabajamuu dhabuun kabaja mirga namoomaaf balaadha,” jedhee ture.
”Hidhaa hin barbaachifne hambisuun, mirga wabii kabajuun barbaachisaadha,” jedhe komishinichi.
Akka Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa jedhutti, Oromiyaatti keessumaa ajajni mana murtii kabajamuu dhabuun yeroo gara garaa mullatu yaaddessaadha
1 thought on “Polisiin Ajaja Mana Murtii Diduun Ob. Lammii fi Dawit Abdataa Hidhaatti deebise.”
Pingback: HUNDEEFFAMA WAGGAA 33ffaa SBO Wax. 15/2021|OROMSIIS ONLINE